बाढिले निम्त्याएको कहरः देशभर १८ को मृत्यु, ७ बेपत्ता, कहाँ के भयाे ? - शैली न्युज
बाढिले निम्त्याएको कहरः देशभर १८ को मृत्यु, ७ बेपत्ता, कहाँ के भयाे ?
२८ असार २०७६, शनिबार ०२:४५
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रैका कुलेश्वर–कलंकी–बल्खु क्षेत्र डुबानमा परे ।
कुलेश्वरको व्यवस्थित ओरियन्टल कोलोनीभित्र नै बाढी पसेर भुइँतला डुबानमा पर्‍यो ।
यीसँगै भक्तपुरको राधेराधे र ललितपुरको पाटन क्षेत्रका बाढीपीडितलाई सशस्त्र प्रहरीले बोटबाट उद्धार गर्‍यो । त्यस्तै, ग्वार्कोस्थित किस्ट अस्पतालको भुइँतलामा पानी पसेपछि बिरामीहरूको उपचारसमेत प्रभावित भयो ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको अविरल वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो गएको छ भने काठमाडौं उपत्यका र तराई डुबानमा परेका छन् ।
शुक्रबार रातिसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । सात बेपत्ता छन् । मृतक र बेपत्ताहरूको संख्या थपिने क्रम जारी छ ।
गृहका अनुसार काठमाडौं र खोटाङमा तीन–तीनजनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, झापा, काभ्रे र भोजपुरमा दुई–दुईजनाको मृत्यु भएको छ । पर्सा, रामेछाप, सिन्धुली, ललितपुर, धादिङ, ओखलढुंगा, बारा र मकवानपुरमा एक–एकजनाको मृत्यु भएको नयाँ पत्रिका दैनिक समाचार लेख्छ ।
काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा– ६ टहरामा बस्दै आएका २० वर्षीया निलु यादव, ३५ वर्षीया शर्मिला यादव र १० वर्षीय कुन्दन यादवको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बलराम खत्रीको घरको पर्खाल भत्किँदा टहरामा बस्दै आएका उनीहरू च्यापिएका हुन् । बारा स्थायी घर भएका उनीहरू काठमाडौंमा ज्यालादारी काम गर्थे । त्यस्तै, ललितपुरमा बागमती नगरपालिका–२ मा पहिरोले घर पुरिँदा सुरज जिम्बाको मृत्यु भएको हो ।
बेदनिधि खनाल । प्रमुख, राष्ट्रिय आपत्कालीन सेवा सञ्चालन केन्द्र
निरन्तरको वर्षापछि तराईका २३ वटै जिल्ला प्रभावित भएका छन् । पहाडका पनि मध्य र पूर्वी क्षेत्रका जिल्ला प्रभावित छन् । कुनै न कुनै रूपमा देशभर नै असर परेको छ ।
बिहीबार र शुक्रबार गरेर बाढी, पहिरो तथा डुबानमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ, १३ घाइते छन्, सातजना बेपत्ता छन् । चार सय ३५ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
एक सय ५३ भन्दा धेरैको उद्धार भएको छ । तराईमा सप्तकोसी र कमला नदी बस्तीमा छिरेको छ । राजमार्गहरू १२ ठाउँमा अवरुद्ध छन् । राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यसपटक पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको छ । एक्सन प्लानअनुसार जिल्लाजिल्लामा उद्धार र पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन् । स्थानीय तहबाट समेत प्रभावकारी काम भइरहेको छ ।
सुरक्षा निकाय, सडक विभागलगायत निकायका संयुक्त टोलीहरू पनि परिचालन भएका छन् । रणनीतिक ठाउँमा विशेष टोलीहरू खटिएका छन् ।
त्रिपाललगायतका सामानहरू जिल्लाजिल्लामा छन् । युनिसेफलगायत निकायले पनि विस्थापितहरूलाई वितरणका लागि सामान खरिद गरेका छन् ।
तराईमा रबरबोटको माग धेरै छ, मागअनुसार दिइएको छ । कतिपय स्थानमा खतराबारे सुसूचित गराउँदा पनि सर्वसाधारणले आफ्नो ठाउँ छाड्न मानेका छैनन् ।
बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रौतहट र सर्लाहीखण्डमा ठूला सवारीसाधन मात्र चल्न सक्ने अवस्था छ । बिपी राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध भएको छ ।
सुनसरीको रामधुनी, धनकुटाको पाख्रिबास, उदयपुरको रौतामाई, खोटाङको हलेँसी, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ, सिन्धुलीको गोलञ्जोर, रामेछापको मन्थली, ललितपुरको महाँकाल–हेटौँडा राजमार्ग, कान्तिपथ र त्रिभुवनपथ तथा लमजुङ–मनाङ सडक पनि बाढीका कारण अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, धावनमार्गबाट यती एयरलाइन्सको जहाज चिप्लिँदा शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि ८ घन्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा अवरुद्ध भयो । नेपालगन्जबाट आएको एटिआर नाइन एन अल्फा एमएम जहाज अवतरणका क्रममा धावनमार्ग छोडर दाहिनेतर्फ १५ मिटर घाँसेमैदानमा पुगेको थियो ।
दैनिक कम्तीमा तीन सय २५ उडान हुने विमानस्थलमा शुक्रबारको दुर्घटनापछि नियमित तालिकामा रहेका ८० प्रतिशत उडान अवरुद्ध भए । साँझ ७ बजेदेखि मात्र सेवा नियमित गरिएको विमानस्थलका प्रवक्ता प्रतापबाबु तिवारीले बताए ।
परवानीपुर गाउँपालिका–१ रहरियाटोलमा घरअगाडि नालामा डुबेर अगेन्द्र यादवका साढे ४ वर्षका छोरा बिकी यादवको मृत्यु भएको छ । बाराका प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरका अनुसार खेलिरहेका उनी नालीमा डुबेका हुन् । अविरल वर्षासँग नाली ठूलो भएको थियो । उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको राठौरले बताए ।
बाढीमा बग्दै आएको दाउरा संकलन गर्ने क्रममा शुक्रबार पर्सामा एक बालकको मृत्यु भएको छ । पर्सागढी नगरपालिका–१ बगवनाका १२ वर्षीय निखिल पटेलको मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक अनन्तराज शर्माले जानकारी दिए । चार दिनदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण पर्साको सदरमुकाम वीरगन्ज डुबानमा परेको छ ।
रानीघाट, श्रीपुर, राधेमाई, रामगढवा, आदर्शनगर, चिनी मिल आवास क्षेत्र, नगवालगायतका क्षेत्र पानीको निकास नहुँदा डुबेका छन् । त्यस्तै, भिस्वा, मुडली, लंगडी, धोबिनी, आसवारी, गुलरिया, जयमंगलापुर, सबैठवा, धोरे, हस्वा, मसिहानी, प्रसौनीभाटा, अमरपट्टि, गर्दौललगायतका अधिकांश गाउँ पनि डुबानमा परेका छन् ।
बाढीले बगाएर दमक–१० मा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । मामा लोकेन्द्र भण्डारीको घरमा बस्दै आएकी संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका–७ की ६ वर्षीया बालिका एलिजा न्यौपानेलाई कलभर्टमा खेलिरहेको बेलामा बगाएको थियो ।
उनलाई पाँच सय मिटर दक्षिणमा फेला पारेपछि अस्पताल लगिएको थियो । त्यहीँ उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । त्यस्तै, बाढीले बगाउँदा भद्रपुर नगरपालिका–९ प्रणामीनगरस्थित हडिया खोला तर्ने क्रममा मेचीनगर नगरपालिका–१४ मजदुर बस्तीका ४५ वर्षीय सुफल हस्दा सतार बेपत्ता भएका छन् ।
कमल गाउँपालिका–२ र शिवसताक्षी नगरपालिका–३ भएर बग्ने कमल खोलाको बाढीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा शुक्रबार एक व्यक्तिको शव भेटिएको छ ।
साँझ साढे ६ बजे शवको पहिचान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । बिहान १० बजेबाट बेपत्ता भएका इलाम चुलाचुली गाउँपालिका–१ का ५० वर्षीय अञ्चल लावतीको शव रहेको पुष्टी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र थाहा नगरपालिकामा बाढीले बगाएर एक बालिका र भिरबाट लडेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । थाहा नगरपालिका– ३ मा महाभिर खोलाले बगाउ“दा घाइते भएकी बालिका सतमाया बलामीको मृत्यु भएको हो ।
खोलाले बगाएपछि स्थानीयले उद्धार गरी अस्पताल पु¥याएका थिए । उनको अस्पतालमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । विद्यालयबाट फर्कने क्रममा जनकल्याण मावि कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने बलामी र स्थानीय युवा सन्तोष बलामीलाई खोलाले बगाएको थियो । सन्तोषलाई सकुशल उद्धार गरिएको छ ।
त्यस्तै, कैलाश गाउ“पालिका– ५ कालिखोलामा आएको पहिरोमा परी तारामाया पाख्रिन बेपत्ता भएकी छिन् । वर्षा जारी रहेको र खोला तर्न नसकिएको कारण स्थानीय बासिन्दा घटनास्थल पुग्न सकेका छैनन् । थाहा नगरपालिका– ७ आग्राको बाल्चा भिरबाट लडेर रौतहटका २७ वर्षीय उमेश यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–३, चुनातालमा पहिरोले घर पुरिँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । ५५ वर्षीया गोमा दंगाल र उनकी सात वर्षीया नातिनी सुहावी दंगालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।
गोमाकी बुहारी सुशीला दंगाल र तीन महिनाकी नातिनी अनुष्का दंगाल भने घाइते भएका छन् । उनीहरूको शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा उपचार भइरहेको छ । बिहीबारदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण काभ्रेका ग्रामीण भेगमा ठाउँठाउँमा पहिरो गएको छ । बनेपा र पनौती डुबानमा परेका छन् । वर्षाका कारण पुन्यमती खोला बढेपछि डुबान भएको हो ।
मृतकका श्रीमान् ३१ वर्षीय विष्णु राई गम्भीर घाइते भएका छन् । उनको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि खोटाङ बजार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वामदेव गौतमले बताए ।
मृतकको शव परीक्षणका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिसापानी पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहान करिब पाँच बजेतिर झरेको पहिरोले घरमा सुतिरहेका चारैजनालाई बगाएको स्थानीयवासीले बताएका थिए ।
पहिरो झर्नासाथ स्थानीयवासीले विष्णुलाई उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बेपत्ता तीनजनाको शव भने इलाका प्रहरी कार्यालय खोटाङबजारबाट उद्धारमा खटिएका प्रहरी टोली र स्थानीयवासीले अपराह्न फेला पारेका हुन् ।
ओखलढुंगामा बाढीले बगाएर दुई जनाएको मृत्यु भएको छ । चिशंखुगढी गाउँपालिका ४ की ८५ वर्षीया पासाङकुटी शेर्पा र सुनकोसी गाउँपालिका ४ चिउरीबोटका ५५ वर्षीय कुमार राईको मृत्यु भएको हो । बिहिबार बेलुका बेपत्ता भएकी शेर्पाको शव शुक्रबार दिउँसो स्थानीय लसुनेखोलाको किनारमाफेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रहरी निरिक्षक राजीव श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै खेतमा पसेको भेल थुन्ने क्रममा मोलुङ खोलाले बगाएर कुमार राईको पनि मृत्यु भएको छ । उद्धारपछि उपचारका लागि उदयपुरको घुर्मी लैजाने क्रममा उनको मृत्यु भएको स्थानीय बुद्धिमान राईले बताए । राईसँगै रहेका उनका दुईजना नाति घाइते भएका छन् ।
पहिरोले गोठ भत्किँदा फिक्कल गाउँपालिका–१ महादेवडाँडाकी ३५ वर्षीया हेमकुमारी सुुनुवारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । वस्तुलाई घाँस हाल्न गोठमा गएकी सुनुवारलाई शुक्रबार गोठसँगै पहिरोले बगाएको थियो ।
उनीसँगै पहिरोमा पुरिएकी एक महिलालाई स्थानीयले सकुशल उद्धार गरेका छन् । सुनवारको तीनवटा गाई र तीनवटा बाख्रासमेत पहिरोले पुरेको छ । बागमती नदीमा आएको बाढीका कारण मरिण र हरिहरपुरगढीका दुई बस्ती डुबानमा परेका छन् ।
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–३ घँटेगुर्जीका ६० भन्दा बढी घर डुबेको गाउँपालिका अध्यक्ष करसाङ लामाले बताए । त्यस्तै, मरिण गाउँपालिका–७ बाह्रबिसेका बस्ती डुबाननमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष पानीराज बम्जनले बताए बिपी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको दर्जनभन्दा बढी पहिरो खसेको छ । गोलञ्जोर गाउँपालिका–२ बितिजोरमा चट्याङ लागेर ४० वर्षीया निर्मला कार्की घाइते भएकी छन् ।
बारामा बाढीका कारण करिब दुई सय घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । बाराका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरले फेटा गाउँपालिका– १ त्रिवेणीमा ८० घर, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– ८ रमौलीमा ३५ घर, वडा नं. १० मा २५ घर, वडा नं. २४ हरपुरमा २५ घरपरिवारलाई अन्यत्र सारिएको जानकारी दिए ।
राठौरले डुबानका कारण जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको जानकारी आइरहेको र उद्धारका लागि प्रहरी परिचालन भइरहेको जानकारी दिए । त्रिभुवन राजपथको पथलैया–हेटौँडा सडकखण्डअन्तर्गत चुरियामाई क्षेत्रमा पहिरो जाँदा यातायात प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
निजगढस्थित सहिद चोक क्षेत्र डुबानमा परेको छ । डुबानका कारण केहीबेर यातायात आवागमनसमेत रोकिएको थियो । डुबानकै कारण निजगढ नगरपालिकाको शैक्षिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ ।
गाई चराउन गएका १७ गोठाला बागमती खोलाको बाढीमा फसेका छन् । रौतहट र सर्लाहीको बीचमा वृन्दावन नगरपालिका–१ बलेरीखोर क्षेत्रमा नदीको बगरमा फसेको तर उद्धार हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरू रूखमा चढेर बसेको र उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेको स्थानीय रूपेन्द्र पटेलले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले उनीहरूको उद्धारका लागि लिखितपत्र पठाएर सेनाको हेलिकोप्टर मगाइएको बताए । नगरपालिकाले आवश्यक सामग्रीसहित उद्धार टोली पठाए पनि प्रयास असफल भएको नगरप्रमुख रामस्नेही यादवले बताए ।
त्यस्तै, गढीमाई नगरपालिका–६ पकहाबखरी टोल डुबानमा पर्दा ४० वर्षीया दुलारी देवी बेपत्ता भएकी छिन् । पकहाबखरी टोलमा दुई सय घर छन् ।
चन्द्रपुर नगरपालिका–३ समेत नदी कटानको खतरामा परेको छ । चाँदी खोलामा आएको बाढीका कारण चन्द्रनिगाहपुरसँग वडाको सम्बन्ध नै टुटेको वडाध्यक्ष रवि देवकोटाले बताए । धार परिवर्तन गरेर खोला गाउँ पस्न थालेको उनले बताए । ३ नम्बर वडामा तीन दिनदेखि बिजुलीसमेत अवरुद्ध छ ।
महोत्तरीको बर्दिबास स्थित ‘भप्सी पुल’ बाढीले बगायो
मौसमः आज पनि लगातारको वर्षा जारीः कहिलेसम्म यस्तै रहन्छ मौसम ?